Lego Trolls World Tour 30555 ဘိန်းရဲ့ Carriage ပြန်လည်သုံးသပ်
08 / 04 / 2020 14 / 04 / 2020 ရော့ Paton 1575 Views စာ0မှတ်ချက် 2020, Lego, Lego GWP, Lego trolls, Lego Trolls World Tour, Trolls World Tour
30555 ဘိန်း၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည်ပြီးပြည့်စုံသောအရသာဖြစ်နိုင်သည် Lego Trolls World Tour သူတို့အားမသေချာသည်။ ၎င်းသည်မဟုတ်ပါ၊ ၀ ယ်သည့်လက်ဆောင်တစ်ခုအနေဖြင့်၎င်းသည်မှန်ကန်သောအကွက်အားလုံးကိုအမှန်ခြစ်ပေးနေသည်
စျေးနှုန်း: LEGO Trolls ကို£ 30 / $ 35 ဖြင့် ၀ ယ်နိုင်သည် အပိုင်းပိုင်း: 51 ရရှိနိုင်ပါ: 6-ပြီ ၆-၁၉ (သို့မဟုတ်စတော့အိတ်ချိန်းနောက်ဆုံး)
အဆိုပါအဘယ်အရာကိုမ Lego Trolls World Tour ဆောင်ပုဒ်မှကိုယ်စားပြုသည် Lego ပရိသတ်တွေလား DUPLO နှင့် System သို့ပထမနှစ်များအကြားကွာဟမှုကိုပေါင်းကူးပေးသောလက်ရှိ 4+ လိုင်းနှင့်ဆင်တူသည့်အငယ်တန်းအကွာအဝေး Lego? အသစ်နှင့် recoloured စိတ်ဝင်စားဖို့အပိုင်းပိုင်း၏ကြီးမားသောဌန်? တစ် ဦး -and ပြုသောအမှုရုပ်ရှင်လိုင်စင် Lego မကြာခင်မှာပဲ Group ကိုမေ့သွားမှာလား။
အများဆုံးဖွယ်ရှိ, Lego Trolls အထက်ဖော်ပြပါအရောအနှောများထဲသို့ ၀ င်ရောက်နေသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်စင်ပေါ်နှင့်အွန်လိုင်းပေါ်ရှိလက်ရှိထုတ်ကုန်လိုင်းအတွင်းတွင်ရောက်ရှိနေသောအနေအထားအတွက်ပိုမိုအတွေ့အကြုံရှိသူအချို့၏စူးစမ်းလေ့လာမှုကိုလျစ်လျူရှုထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ Lego ပရိတ်သတ်တွေ။ ၎င်းသည်သူအသုံးပြုသောအရောင်များနှင့်ယင်း၏မိတ်ဆက်အပိုင်းများ (တစ်ခါတစ်ရံပြန်လည်အရောင်ခြယ်ထားသောအပိုင်းအစသည်ကြည့်ရလောက်အောင်ကောင်းမွန်သော်လည်းတည်ဆောက်ရန်ခက်ခဲသည်) အတွက်ထင်မြင်ချက်ကိုပိုярဝါးစေလိမ့်မည်။ ၎င်း၏ထူးခြားသောအသွင်အပြင်နှင့်ထုတ်ကုန်အကွာအဝေးအားဖြင့်အတွက်ရေးဆွဲ။
၃၀၅၅၅ ဘိန်း၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည်သင်နှင့်ပတ်သက်ပြီးမည်သည့်ထင်မြင်ယူဆချက်ကိုမဆိုတိုးမြှင့်ခြင်း မှလွဲ၍ မည်မျှဝမ်းနည်းစရာကောင်းသနည်း။ Lego Trolls။ ၎င်းသည်အခြားကုန်ပစ္စည်းများ ၀ ယ်သူများအတွက်ပုံမှန်မဟုတ်သည့်အဖြူရောင်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောအုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောကမ္ဘာကြီးသို့လျင်မြန်။ လွတ်လပ်စွာဝင်ရောက်နိုင်သည့်နေရာဖြစ်သည် LEGO.com သို့မဟုတ်ပါက ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းဖြင့်လက်ဆောင်ပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အဲဒီအစား ပိုးအိစံ မှာရရှိနိုင် LEGO.com ထံမှထံမှ£6သို့မဟုတ် $ 19 ဝယ်ယူမှုခြေစစ်ပွဲနှင့်အတူAprilပြီလ 30 ကနေ 35 (သို့မဟုတ်စတော့ရှယ်ယာနောက်ဆုံး) Lego Trolls ထုတ်ကုန်လိုင်းသာ
သင်ဝယ်ယူရန်လုံလောက်သောစိတ်ဝင်စားမှုရှိပါက Lego Trolls များသတ်မှတ်ထားသည့်အတွက်၎င်းသည်ချစ်စရာကောင်းသောနှင့်ပျော်စရာကောင်းသောထပ်မံတည်ဆောက်မှုတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မည်။ သင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းစတီယာရင်နေလျှင် Lego အပေါ်ဝယ်ယူသည့်အခါ Trolls LEGO.com သင်ဤအရာကိုသင်ရရှိမည်မဟုတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့်အခြားကွဲပြားခြားနားသောအရသာတစ်ခု၏ပထမအရသာကိုပြသနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
၎င်းသည်မဟုတ်လျှင်အစိုင်အခဲဖြစ်သောကြောင့် 30555 Poppy's Carriage အတွက်တစ်ခုတည်းသောအားနည်းချက်ဖြစ်သည် ပိုးအိစံ စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောအရောင်များဖြင့်ရောစပ်ထားသောအပိုင်းအစများ၊ ရုပ်ရှင်အသစ်မှအဓိကဇာတ်ကောင်တစ် ဦး နှင့်၎င်းကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုကိုကမ်းလှမ်းသည် Lego အစုံသည်သင်ရှိပြီးသားအရာအားလုံးနှင့်မတူပါ။
ဘို့ Lego Trolls ပရိတ်သတ်တွေအခုအချိန်မှာအကွာအဝေးကနေတစ်ခုခုကိုကောက်ယူဖို့အချိန်တန်ပါပြီ - ငါတို့မျက်စိကြည့်နေကြသည် 41256 သက်တံ့ရောင် Caterbus - နှင့်ပင်ကြည့်ဖို့စဉ်းစားမည်မဟုတ်သူအပေါငျးတို့အဘို့ Lego Trolls၊ မင်းဒါမဖတ်ချင်ဘူး၊
အဆိုပါရန်သင့်အားကျေးဇူးတင်ပါသည် Lego ဒီပေးဘို့အုပ်စု ပိုးအိစံ ပြန်လည်သုံးသပ်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်။
သင်ဝယ်ယူနေတယ်ဆိုရင် Lego ဒီထူးခြားတဲ့အချိန်ကာလအတွင်း, ကျေးဇူးပြု။ မှတဆင့်အဲဒီလိုလုပ်ပါ တွဲဖက်လင့်ခ်များ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအင်္ဂါရပ်တစ်လျှောက်လုံးတွင်တင်ပြထားသည် - ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နေသောလုပ်ငန်းကိုအမှန်တကယ်အထောက်အကူပြုသည် Brick Fanatics။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
← Lepin သည်ပန်ကာဒီဇိုင်းများကိုဆက်လက်ခိုးယူနေသည်
LEGO စက်ရုံသည်ကျန်းမာရေးလုပ်သားများအတွက်လုံခြုံမှုရှိစေရန်ထုတ်လုပ်ပေးသည် →